Godey: Shacabka aan Soomaalida ahayn oo hantidii laga dhacay loo celiyey |
Godey: Shacabka aan Soomaalida ahayn oo hantidii laga dhacay loo celiyey
Godey (estvlive) 12/08/2018
Guud ahaan ba magaalooyinkii qalalaasuhu ka dhacay 4 bishan August iyo maalmihii ka dambeeyey ayaa haatan xasiloon. Waxaanay wararku intaa ku darayaan in ay duulimaadyadii diyaaradaha ee u kala socdaali jiray Jigjiga iyo Addis Ababa iyaguna horrantii todobaadkan dib u bilaabmeen.
Meelihii kale ee dhibaatooyinku ka dhaceen waxa ka mid ahayd magaalada Godey oo dadkii deganaa ee aan Soomaalida ahayn ganacsigoodii la boobay. Dhibtaas oo la sheegay inay geysteen dhalin yaro mudaharaadayey oo sida la sheegay ka cadhaysnaa xiisaddii ka aloosantay magaalada Jigjiga ee xarunta Dawlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Hadba waxa maalmahan socday dedaal ay wadeen xubno ka tirsan Golaha Sare ee Islaamka Itoobiya xafiiskiisa Godey oo waday waano iyo wacyi gelin ay ku daminayeen xaaladdii taagnayd. Waxaanay sidoo kale isku hawleen in ay u soo celiyaan dadkaa qawmiyadaha kale ka tirsan wixii hanti ah ee laga dhacay.
Shariif Cabdifataax oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in ay ku guulaysteen in ay ilaa haatan boqolkiiba sideetan u soo celiyaan dadkii la dhacay hantidii ka maqnayd. Waxaanu ugu baaqay shacabka deegaankaas Soomaalida Itoobiya ku dhaqan in ay ilaaliyaan nabad gelyada oo aanay ku daydaan tallaabada ay qaadeen dadka reer Godey oo ay isku dumaan dadka xiisaddu kala geysay.